Madaxa xibsiga Ford Kenya Moses Wetangula oo baaq uu diray Madaxweyne Uhuru kenyatta. – iftiin fm
Madaxa xibsiga Ford Kenya Moses Wetangula oo baaq uu diray Madaxweyne Uhuru kenyatta.
November 22, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Madaxa xibsiga Ford Kenya Moses Wetangula ayaa manta baaq xoogan uu diray madaxweyne uhuru kenyatta iyo hoggamiyaha ODM Raila Odinga .
Madaxa xibsiga Ford Kenya Moses Wetangula ayaa ugu baaqay madaxweyne uhuru kenyatta iyo mudane Raila Odinga in ay ka shaqeeyaan sidii xubnaha shacabka ay ku taageri lahaayeen warbixinta BBI-da islamarkaasina ay meesha ka saaraan mad madowga ku daboolan warbixinta BBI-da .
Mr Moses Wetangula ayaa sheegay in dib uu dhigidda soo uruurinta saxiixyada wax looga baddalaya BBI-da ay tahay fursad loogu bahan yahay in madaxweyne uhuru kenyatta iyo Mudane Raila Odinga ay ka faaiideystaan islamarkaasina ay xal uu raadiyaan qodobada lagu muransan yahay ee ku jiraan warbixinta BBI-da .
Madaxa xibsiga Ford Kenya Moses Wetangula ayaa baaqani uu diray madaxweyne uhuru kenyatta iyo Mudane Raila Odinga kadib markii uu kulan uu la qaatay madaxda xisbiga Ford kenya ee gudaha ismaamulka Uasin Gishu
← Caruur badan oo iskuuley ah oo xabsiga la dhigay .
Madaxa Wadamada G-20 -ka oo maanta kulan yeelanayaan . →